Maty ny marina | NewsMada
Niteraka resabe tamin’iny herinandro lasa teo iny ny momba ny tanànan’ny Pr Zafy Albert, ny «Villa Elisabeth», eny Ivandry, hoe nisy nivarotra. Siosion-dresaka aloha no nandrenesana azy teny am-boalohany. Nihanahoraka, nihanahoraka. Tamin’ny faramparan’ny herinandro teo, nanomboka nivoaka ny antontan-taratasy isan-karazany. Nipoitra hatramin’ny anarana manam-pahefana, mpitondra ambony tamin’ny fotoan’androny hoe tompon’antoka tamin’ny fivarotana io tanàna io.
Lasa karazana ampamoaka ankehitriny ny fahitana ny raharaha. Ampamoaka ifanaovan’ny mpitondra amin’izao fotoana izao sy ny mpanohitra, na ny marimarina kokoa, ny fitondrana Tetezamita tamin’ny fotoan’androny. Fitondrana Tetezamita hoe ? Angaha moa tsy tao anatin’izany ny ankamaroan’ny mpitondra amin’izao fotoana izao ? Manomboka amin’ny filoham-pirenena izany. Sangodim-panina re izao.
Izao ka lasa fifamaliana, fifanilihana andraikitra. Ifaninanana ny famoahana dosie. Mamoaka ny andaniny, manatsinkafona manao setriny ny ankilany. Fifampiampangana tsy misy ohatra izany. Papangolahy anaty katsaka, izay mivoaka toa babany avokoa. Fanina ny mpanara-baovao, mainka moa fa ny olon-tsotra.
Raha dinihina izao fandehan’ny raharaha izao, ataovy veloma hatreo ny hivoahan’ny marina mikasika ity “Raharaha fivarotana ny villa Elisabeth” ity. Ho sahy hanenjana, hanokatra famotorana lalina, hitondra ny raharaha eny amin’ny fitsarana, hanasazy sy hanameloka izay tena tompon’antoka amin’izany, ve ny fitondrana ankehitriny? Sarotra inoana izany. Raha tsy hoe hikiribiby, hila raharaha angaha.
Ohatra iray amin’ny maro, mampiseho ny halatra sy fitiavan-tena, mampibaribary ny fahalovana, mampisongadina ny tsy fahamarinan’ny mpitondra sy ny mpanao politika eto amin’ny firenena hatramin’izay ka hatramin’izao izany. Tsy matahotra an’Andriamanitra ! Maty ny marina.